Mabasa 23 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mabasa Evaapostora 23:1-35
Pauro anotaura pamberi peSanihedrini (1-10)
Pauro anosimbiswa naIshe (11)
Kurangana kuuraya Pauro (12-22)
Pauro anoendeswa kuKesariya (23-35)
23 Pauro akanyatsotarisa dare reSanihedrini akati: “Varume, hama, ndakazvibata nehana yakanyatsochena pamberi paMwari+ kusvikira nhasi.” 2 Mupristi mukuru Ananiyasi akabva audza vakanga vakamira pedyo naye kuti vamurove pamuromo. 3 Pauro akabva ati kwaari: “Mwari achakurova, iwe madziro akadzururwa nevhu jena. Ungagara pasi kuti unditonge maererano neMutemo, wotyora Mutemo wacho zvakare nekurayira kuti ndirohwe?” 4 Vaya vakanga vakamira pedyo vakati: “Uri kutuka mupristi mukuru waMwari here?” 5 Pauro akati: “Hama, handina kuziva kuti ndiye mupristi mukuru. Nekuti zvakanyorwa kuti, ‘Usataura zvakaipa pamusoro pemutongi wevanhu vekwako.’”+ 6 Pauro aiziva kuti vamwe vavo vaiva vaSadhusi vamwe vavo vari vaFarisi, saka akashevedzera mudare reSanihedrini achiti: “Varume, hama, ini ndiri muFarisi,+ mwanakomana wevaFarisi. Ndiri kutongerwa kuti ndine tariro yekuti vakafa vachamuka.” 7 Paakataura izvi, vaFarisi nevaSadhusi vakatanga kukakavadzana, dare rikabva rapesana. 8 Nekuti vaSadhusi vanoti hakuna rumuko kana ngirozi kana mweya, asi vaFarisi vanobvuma kuti zvese zviriko.+ 9 Saka pakaitika zhowezhowe, uye vamwe vanyori vaiva vaFarisi vakasimuka vakatanga kuita nharo dzinotyisa, vachiti: “Hapana chakaipa chatiri kuona pamurume uyu, asi kana mweya kana kuti ngirozi yakataura naye+—.” 10 Nharo dzacho padzakawedzera, mutungamiriri weuto akatya kuti Pauro aizoitwa kanyama kanyama, saka akarayira varwi kuti vauye kuzomubvisa pakati pavo, vopinda naye mudzimba dzevarwi. 11 Asi usiku hwakatevera Ishe akamira pedyo naye, akati: “Usatya!+ Nekuti unofanirawo kupa uchapupu hwakasimba nezvangu kuRoma sezvawanga uchiita muJerusarema.”+ 12 Pakwakaedza, vaJudha vakarangana, vakaita mhiko yekuti vatukwe kana vakadya kana kunwa vasati vauraya Pauro. 13 Paiva nevarume vanopfuura 40 vakabatana mukurangana uku kwaisimbiswa nemhiko. 14 Varume ava vakaenda kuvatungamiriri vevapristi nevakuru, vakati: “Taita mhiko yekuti tisadya kana chii zvacho kusvikira tauraya Pauro. 15 Saka imi neSanihedrini udzai mutungamiriri weuto kuti auye naye kwamuri sekunge kuti muri kuda kunyatsoongorora nyaya yake. Asi asati atombosvika, isu tichange tatogadzirira kumuuraya.” 16 Asi mwanakomana wehanzvadzi yaPauro akanzwa kuti vairangana kumuhwandira, akabva apinda mudzimba dzevarwi, ndokuudza Pauro nezvazvo. 17 Pauro akabva ashevedza mumwe wevarwi, akati: “Perekedza mukomana uyu kumutungamiriri weuto, nekuti ane zvaari kuda kumuudza.” 18 Saka akamutora akaenda naye kumutungamiriri weuto, akati: “Musungwa uya Pauro andishevedza akakumbira kuti ndiuye nemukomana uyu kwamuri nekuti ane zvaari kuda kukuudzai.” 19 Mutungamiriri weuto akamubata ruoko akaenda naye pake ega ndokumubvunza kuti: “Chiiko chauri kuda kundiudza?” 20 Iye akati: “VaJudha vabvumirana kuti vakukumbirei kuti muende naPauro kuSanihedrini mangwana sekunge kuti vari kuda kunyatsoziva nezvenyaya yake.+ 21 Asi musavarega vachikunyengetedzai, nekuti varume vavo vanopfuura 40 vakamuhwandira, uye vaita mhiko yekuti vasadya kana kunwa kana vasina kumuuraya;+ uye vatomirira kunzwa zvamuchataura.” 22 Mutungamiriri weuto akazoita kuti mukomana wacho aende hake, pashure pekumuudza kuti: “Usaudza mumwe munhu kuti wanditaurira nyaya iyi.” 23 Akashevedza vakuru veuto vaviri, akati: “Itai kuti varwi 200 vagadzirire kuenda kuKesariya netsoka, nevatasvi vemabhiza 70 nevarume 200 vane mapfumo, paawa yechitatu manheru.* 24 Muitewo kuti Pauro ave nemabhiza ekutasva, kuti asvike zvakanaka kuna gavhuna Ferikisi.” 25 Uye akanyora tsamba ine mashoko aya: 26 “Kraudhiyo Risiyasi kuna Gavhuna Ferikisi Vanoremekedzwa: Kwaziwai! 27 Murume uyu akabatwa nevaJudha uye vakanga vava kuda kumuuraya, asi ndakakurumidza kusvika nevarwi vangu ndikamununura,+ nekuti ndakanzwa kuti chizvarwa cheRoma.+ 28 Ndakadzika naye kudare ravo reSanihedrini ndichida kuziva mhosva yavaimupomera.+ 29 Ndakaona kuti aipomerwa nyaya dzine chekuita neMutemo wavo,+ asi pasina mhosva yaari kupomerwa ingaita kuti aurayiwe kana kuti asungwe. 30 Asi ndakaudzwa kuti vakarangana kumuuraya,+ saka ndabva ndangomutumira kwamuri, uye ndaudza vari kumupomera kuti vataure nyaya yavo pamberi penyu.” 31 Saka varwi ava vakatora Pauro+ sezvavakanga varayirwa, vakaenda naye kuAndipatrisi usiku. 32 Mangwana acho vakaita kuti vatasvi vemabhiza vaende naye, ivo ndokudzokera kudzimba dzevarwi. 33 Vatasvi vemabhiza vakasvika muKesariya, vakasvitsa tsamba kuna gavhuna, ndokuisa Pauro mumaoko ake. 34 Saka akaiverenga akamubvunza kuti aibva mudunhu ripi, akaudzwa kuti aibva kuKirikiya.+ 35 Iye akati, “Ndichanyatsonzwa nyaya yako kana vari kukupomera vasvika.”+ Uye akarayira kuti achengetedzwe mumuzinda waHerodhi.
^ Kureva, kuma9:00 dzemanheru.